Electric Lubrication Pump | Paompy menaka mandeha amin'ny herinaratra
Paompy fanosotra elektrika
Home/Paompy elektrika famenosana herinaratra
Paompy elektrika famenosana herinaratra[email voaaro]2022-01-31T04: 14: 25 + 00: 00
Paompy menaka fanosorana elektrônika - Paompy famatsiana menaka mandeha amin'ny herinaratra
Nahoana no mividy paompy menaka fanosotra elektrika izahay:
- Ny kojakoja rehetra dia vita tsara, voazaha 100% araka ny fenitra mahafeno fepetra, tohanan'ny mpanamboatra anay amin'ny fanamboarana ho avy.
- Ny fanitarana ny fe-potoana fikojakojana ny trano, ny fampihenana ny fotoana fikojakojana, ny paompy dia hampihena ihany koa ny tsy fahombiazan'ny lubrication tsara sy ny sandan'ny fikojakojana mifanaraka amin'izany, hampitombo ny taham-pahavitrihana sy ny fahombiazan'ny asa.
- Ny fampitomboana ny androm-piainan'ny kojakoja misy menaka hatramin'ny 60 ka hatramin'ny 80%, na miaraka amin'ny rafitra fanosorana afovoany dia hiantoka fa ny teboka fanosotra rehetra dia mihosotra.
Manolotra karazana paompy menaka fanosotra elektrika isan-karazany izahay ho an'ny fanerena antonony na fitaovana fanosorana avo lenta amin'ny fiasan'ny rafitra.
Miaraka amin'ny 10 taona mahery amin'ny fanamboarana ny paompy menaka fanosotra, ny paompy ataontsika dia asa avo lenta sy adidy mavesatra amin'ny toerana miasa isan-karazany amin'ny sehatry ny indostrian'ny fanorenana, fiara, an-dranomasina, fambolena ary toeram-pambolena indostrialy manana toetra maharitra, azo itokisana, fiainana lava kokoa.
Paompy menaka fanosotra DDB10
Multipoint misy 10 lubrication injector
Motors mahafeno fepetra amin'ny asa mavesatra
Ny fiainana fanompoana lava kokoa, ny ampahany aorian'ny varotra tohanana
Paompy menaka fanosotra DDB18
Hatramin'ny nos. 1~18 fivoahana fanosotra
Max. tsindry 10Mpa, motera elektrika 380VAC
Haben'ny famahanana 0.2ml/min. , 23L Volume tank
Paompy menaka fanosotra DDB36
Hatramin'ny nos. 1 ~ 36 lubricating outlet misy
Max. tsindry 31.5Mpa, motera elektrika 380VAC
Volon'ny tanky menaka 10L; 30L safidy
Misy setup discharge samihafa
Max. fanerena miasa 25Mpa
Famahanana boky avy amin'ny 0.3ml/kapoka ~ 0.5ml/kapoka
Volon'ny tanky menaka 4L~10L ho an'ny safidy
Famahanana boky avy amin'ny 0.3ml/kapoka ~ 5ml/kapoka
Volon'ny tanky menaka 8L~30L ho an'ny safidy
Max. fanerena miasa 31.5Mpa
Famahanana boky avy amin'ny 380ml/min.~360ml/min.
Volon'ny tanky menaka 30L ho an'ny safidy
Ny habetsahan'ny famahanana avy amin'ny 0.5ml/kapoka
APG Pneumatic Grease Pump
Miasa amin'ny rivotra & paompy menaka
0.6 ~ 0.8Mpa Nomral tsindrin-tsakafo, 30 ~ 40Mpa avo tsindry fivoahana
12L, 30L, 45L barika fanosotra ho an'ny safidy
Paompy fanosorana afovoany
Max. tsindry 40Mpa, motera elektrika 380VAC
Vola famahanana avy amin'ny 135 ~ 400ml/min.
Vola famahanana avy amin'ny 25 ~ 90ml/min.
Volon'ny tanky menaka 30L miaraka amin'ny lanjany maivana
Max. tsindry 20Mpa, motera elektrika 380VAC
Vola famahanana avy amin'ny 60 ~ 585ml/min.
Volon'ny tanky menaka 20L; 35L ; 90L safidy
Single na double paompy, max. tsindry 40Mpa
Vola famahanana avy amin'ny 120 ~ 360ml/min.
Volon'ny tanky menaka 30L ~ 100L ho an'ny safidy
Vola famahanana avy amin'ny 100 ~ 630ml/min.
Volon'ny tanky menaka 50L ~ 120L ho an'ny safidy
Max. tsindry 40Mpa na 20Mpa
Vola famahanana avy amin'ny 200 ~ 800ml/min.
Volon'ny tanky menaka 60L ~ 100L ho an'ny safidy
Ny habetsahan'ny famahanana avy amin'ny 63ml/min.
Volon'ny tanky menaka 8L ho an'ny safidy
Paompy DRB-J, U-25DL, U-4DL
Famahanana boky avy amin'ny 60ml/min.~195ml/min.
Volon'ny tanky menaka 16L~26L ho an'ny safidy
SDRB-N Lubrication paompy
Famahanana boky avy amin'ny 60ml/min.~585ml/min.
Volon'ny tanky menaka 20L~90L ho an'ny safidy